डिस्कको लागि लिफ्टको लागि आफ्नै हात स्क्रैपबुकिङ - मास्टर क्लास फोटो सहित
स्क्रैपबुकिंग प्रविधिमा कागजको डिस्कको लागि लिफाफे कसरी बनाउने?
लामो समय बित्यो, फोटो बनाउनको लागी, तपाईं फोटो स्टूडियोमा जानुपर्छ। अब सबैको लागि आफुलाई गोली माराउन वा पेशेवरहरूको सहयोग खोज्ने अवसर छ । जे भए तापनि, तर प्रत्येक परिवारको पारिवारिक संग्रह धेरै मनपर्ने फोटाहरू छन्। प्रायः यी तस्बिरहरू डिस्कमा रेकर्ड गरिएका छन्, तर के यो एक सभ्य डिजाइन मनाउन बहाना छ? डिस्कहरूको लागि लिफ्टहरू - महँगी हृदयहरू भण्डारण गर्न उत्कृष्ट समाधान।
मैले एकैछिनमा धेरै लिफाहरू बनाउने निर्णय गरेँ, त्यसमा फोटोमा, सात लिफ्टहरूको लागि डिजाइन गरिएको सामग्री। अर्को, म तपाईलाई विस्तारमा बताउनेछु कि तपाईंको हातले स्क्रैपबुकिंग प्रविधिमा कागजको डिस्कको लागि लिफाफे कसरी बनाउने?
डिस्कको लागि स्क्रैपबुकिंग लिफा
आवश्यक उपकरण र सामग्री:
पानीको रंग, ब्रश;
सजावटको लागि बटन र रिबन;
डबल-पक्षीय चिपकने वाला टेप, गोंद;
कैंची, जादुई चाकू, शासक;
सिलाई मेशिन (वैकल्पिक)।
लिफाफेहरूको आधारको रूपमा, मैले पानीको पृष्ठभूमिमा निर्णय गर्ने निर्णय गरेँ, त्यसैले हामी सबैलाई तयार पार्छौं - पहिला हामी पानीको साथमा कागजलाई चिसो पार्छौं र त्यसपछि प्यान्टको साथ लिन्छौं। अतिरिक्त प्रभाव र स्क्रैप पेपर संग संयोजन तपाईं धेरै रंगहरु मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि कागजलाई इच्छित आकारको भागहरूमा काट्नुहोस्। यहाँ र थप म एक लिफाफेको सिर्जना देखाउनेछु, तर सम्पूर्ण सीरीज निरन्तर छ, त्यसोभए प्रक्रिया एउटै छ।
Biguem (तहको माध्यमबाट) पानीको रंगको कागज र अतिरिक्त कट। क्र्यासको लागि, तपाईं न केवल एक विशेष मोम, तर विभिन्न प्रकारका सुधारिएको वस्तुहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ - चम्मच, प्लास्टिकको कार्ड वा कलम जसले लेख्दैन।
हामी तीन वर्ग (सबै भन्दा ठूलो देखि सानो) गोंद गर्छौं, साथसाथै एक लिफाफे को आधार मा चिपकाइएको छ।
कागजको मध्य र सानो वर्ग टाँस्नुहोस्।
र चाँडै हामी आधार को एक पक्ष को लागि पेपर सिलाई।
अब हामी हाम्रो लिफाफेहरू सजायौं:
हामी सब्सट्रेटमा छवि टाँस्नेछौं (पहिले तयार पानीको पृष्ठभूमिको भाग) र तस्विरको पछाडि टेपमा ट्याप मिलाउनुहोस्।
त्यसपछि, हामी तस्वीरलाई कागजमा सिलाई दिन्छ (ब्र्याडहरू, बटनहरू वा अन्य गहनाहरू पनि थप्नुहोस्) र त्यसपछि समाप्त संरचनामा पानीको किनारामा सिने हुन्छ।
अन्तिम चरण लिफाफा गोंग गर्न र तीनवटा पक्षमा यसलाई अझ बढि विश्वसनीयताको लागि स्टिच गर्नु हो।
रंग र तस्वीर परिवर्तन गर्दा विभिन्न तस्विरहरूको लागी लिफाहरू बनाउन सकिन्छ, एक एकल शैलीको सामना गर्न र परिवार अभिलेखलाई थप आकर्षण दिन सक्छ।
मास्टर वर्गको लेखक मारिना निकोषोवा हो।
नयाँ सालका लेखहरू महसुस गरिएका छन्
इयरफोन बाट कंगन
Felting mittens - एक मास्टर वर्ग
घरको कागज कसरी बनाउने?
तपाईंको हातले कसरी मोमबत्ती बनाउन सक्छ?
मेरी आमालाई पोकार्डकार्ड कसरी बनाउने?
तपाईंको हातले पोष्टकार्डहरू क्विल गर्दै
क्रेकेलर आफ्नै हात
मिठाइहरु बाट घण्टा
सब्जी मज्जाबाट जहाज
महसुसको गाजर - लगभग वास्तविक कुरा!
स्कोओलोसिसमा पछाडि व्यायाम गर्नुहोस्
सुपर बाल को लागि हल्का - गोरा र ब्रलिनेट को लागि धुंधला को सबै भन्दा राम्रो तरिका
बेला हलेडले आफ्नो उपन्यास ड्यानियल चीट्रिटसँग कुराकानीको बारेमा टिप्पणी गरे
कान किन जलाउँछ?
दुई मुटुमा स्नड
फैशनेबल जीन्स 2017 - कुन जीन्स नयाँ वर्षमा फैशनमा रहनेछ?
एक बुना भयो स्कर्ट कसको साथ?
महिलाहरु मा हृदय विफलता को लक्षण
वसा महिलाहरुको लागि समुद्रतट फैशन
पखेटाहरू कसरी बनाउने?
Santorini मा गर्न को लागी कुरा
चार्लीज थेरोन फिल्म "फास्ट र थोरै 8" मा मुख्य खलनायक थिए।
Ureaplasmosis कसरि छ?
स्टिकहरू साथ हिड्ने
वजन घटाने को लागि स्थान मा चलिरहेको - दक्षता र कार्यान्वयन नियमहरु
चिह्न "अनइरङ रंग" - अर्थ
जेम्स कर्डन तेस्रो पटकको पिता बने
जोन हकस्टन आफ्नो युवाहरु मा